About Us - Hunan Kukai korontada Co. Ltd.
Aanan for Machine
News Update Oo
Soo dejiso APP
Hunan Kukai korontada Co. Ltd
Hunan Kukai korontada Co. Ltd waa ganacsi farsmada heerka sare ah takhasusay R & D, wax soo saarka iyo iibinta mashiinka fure goynta, oo uu fadhigoodu yahay magaalada Changsha, Gobolka Hunan. Waxaan ku siin xal goynta muhiimka ah hal-abuurnimo ah muftaaxlaha miyir leh. badeecada lagu iibin adduunka oo dhan, sida USA, Europe, koonfur, Korea iyo wixii la mid ah. sponsor waa xirfadlayaal sare oo og dabeecadaha goonida kala duwan oo inta badan ka mid ah dhibaatooyinka kala duwan kala kulantay shaqada la taaban karo. waxyaabaha Our, CNC Automatic Key jarida taxane Machine, taageeri karaan diyaarinta furayaasha kala duwan, sida muhiimka ah axdi qarameedka Caraabaah, muhiimka ah axdi qarameedka wejiga, Allen muhiimka ah (F021), Stiletto andCylinders fure muhiim ah, kaas oo nuqul kartaa furaha adigoo isticmaalaya database haddii aad ayaa laga badiyay furaha. Intaa waxaa dheer, dad badan oo dheeraad ah oo ku haboon iyo qalabka lagu horumariyo. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ku siin karaan qalab dheeraad ah daawaha oo tayo sare leh oo la doortay macaamiisha.
Hunan Kukai korontada Co. Ltd waa ganacsi farsmada heerka sare ah takhasusay R & D, wax soo saarka iyo iibinta mashiinka fure goynta, kaas oo xaruuntiisu tahay magaalada Changsha, Gobolka Hunan. Waxaan ku siin
Room 302, Dhisidda 10, International Business Center, Ilaalinta Deegaanka Science Park, Degmada Yuhua, Changsha, Hunan, Shiinaha
Marka aad noo soo dirto baaritaan, fadlan tagto dalka magacaaga, email, lambarka telefoonka gacanta, waxaan kuu soo jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood. Waad ku mahadsan tahay taageerada aad weyddiistay pricelist
Auto , Mashiinka Muhiimka ah ee Goynta Mashiinka , Key Nuqul Mashiinka keydka , Sec E9 , Auto muftaaxlaha muftaaxlaha , Tools Alibaba muftaaxlaha ,